"Legioma-voankazo WHOLESALE". Channel Telegram amin'ny maha sehatra varotra mahomby azy - magazine "Potato System"
"Legioma-voankazo WHOLESALE". Channel Telegram amin'ny maha sehatra varotra mahomby azy
Ny vondrona "legioma-voankazo OPT", izay niasa tamin'ny telegramana nandritra ny roa taona, dia toerana fihaonan'ny mpivarotra sy ny mpividy. Doka am-polony am-polony no avoaka eto isan'andro, ary feno sary mazava tsara ny sakafo: zucchini vaovao, tongolo volamena, paoma misy lafiny mena, frezy be ranony, anana, voanjo, holatra ...
Ny jeografian'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona dia tena samihafa ary mandrakotra ny sahan'ny post-Sovietika rehetra: Russia, Belarus, Ukraine, Armenia, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Ho fanampin'izy ireo dia misy koa Egypt, Iran ary firenena hafa.
Betsaka ny olona te hivarotra na hividy: amin'izao fotoana izao dia misy olona mihoatra ny 8500 ao amin'ilay vondrona, ary mitombo hatrany ny isan'izy ireo.
Miresaka amin'ny mpanorina ny loharanom-pahalalana, Alexander Andriyants izahay, momba ny fomba nahavitan'ilay fantsona ho sehatra varotra mahomby.
- Alexander, nahoana no noforonina io vondrona io?
- Nila fantsom-pizarana mahomby ho an'ny vokatrao aho (Alexander Andriyanets no lohan'ny orinasa roa: LLC A-Trade (Russia) sy IE Andriyanets A.V. (Repoblikan'i Belarus), mivarotra ny vokatra tantsaha - ed.). Saingy nisokatra tamin'ny tolo-kevitra hafa ny vondrona tamin'ny voalohany, ary mino aho fa marina io fanapahan-kevitra io. Ankehitriny dia lehibe ny fikorianan'ny doka, ahafahantsika "mitazona hatrany ny rantsantananantsika amin'ny pulsa": hahafantatra ny vidiny eny an-tsena, hahitana ny filan'ny mpividy. Ary iza no manana vaovao, araky ny fantatrao, tompony izao tontolo izao.
Raiso, ohatra, ny vanim-potoana famaranana: hatramin'ny fararano dia mazava amintsika fa misy tsy fahampian'ny karaoty eny an-tsena, satria nanomboka nangataka ara-bakiteny avy hatrany ny fangatahana an'ity vokatra ity avy amin'ny mpandraharaha lehibe rehefa vita ny fijinjana, ary tamin'ny taona lasa , ny fahalianana amin'ny karaoty dia tsy nifoha raha tsy tamin'ny fiandohan'ny lohataona ...
- Nanjary nalaza niaraka tamin'izay ve ilay vondrona?
- Tsia mazava ho azy. Tonga tsikelikely ny olona. Voalohany, nanasa ny mpanjifanay izahay, olom-pantatray avy any Rosia sy Belarus, nahasarika ny olom-pantatr'izy ireo izy ireo, ary avy eo dia nanan-kery ny fitsipiky ny "tànana enina".
- Ahoana no nampiroboroboanao ny vondrona any amin'ny firenen-kafa?
- Ny fahamendrehan'ny telegram ihany. Ity messenger ity dia manolotra vondron'olona maro karazana mifototra amin'ny fangatahana fikarohana, ary miasa ity algorithm ity. Manana vondrona mitovy lohahevitra ao Viber ihany koa izahay, ary misy antsasaky ny isan'ny mpikambana, ary vondrom-piarahamonina vitsy dia vitsy ao amin'ny WhatsApp (misy fetra hatramin'ny 250 ny mpikambana ao). Ny fantsona telegram no nahomby indrindra.
- Manana mpitantana sariaka be ny vondrona misy anao. Raha tsy mahafeno ny fepetra takiana ny doka dia mahazo fampitandremana ny mpanoratra azy ireo, fa ny vaovao kosa tsy voafafa. Ny zava-drehetra dia henjana kokoa amin'ny gorodona varotra hafa.
- Izany no politikan'ny vondrona. Mety tsy hamaky ny lalàna ny olona na tsy hamaky azy tanteraka, mety tsy hahatakatra zavatra izy - ara-dalàna izany, manan-jo hanao fahadisoana ny tsirairay. Ny mpitantana dia manampy ny olom-baovao hahalala izany. Ny spam tsotra fotsiny dia voafafa avy hatrany, izay, soa ihany, tsy ampy.
Holazaiko ihany koa fa ny asan'ny mpitantana ao amin'ny vondrona misy anay dia ataon'ny tantsaha iray avy amin'ny faritra Rostov. Araka izany, amin'ny ririnina dia afaka manokana fotoana bebe kokoa hanaovana an'io asa io izy (amin'izao fotoana izao dia tsy mifehy fotsiny ny sakafo izy, fa mametraka vaovao mifandraika amin'ny mpihaino ihany koa), ary amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana - kely kokoa, saingy tsy mila henjana ny vondrona fitsipika: ny doka ihany no navoaka tao anaty fahana, ny fanontaniana apetraky ny mpanoratra azy dia azo apetraka amin'ny "manokana".
- Miorina amin'ny traikefa, inona no tokony ho doka mety indrindra amin'ny fantsonao?
- Ilaina ny manondro amin'ny lahatsoratra: anaran'ny vokatra, vidiny, toerana, fifandraisana. Raha misy izany rehetra izany, na ny mpivarotra na ny mpividy dia tsy mila mandany ny loharanon-karena lehibe indrindra amin'ny fanazavana - fotoana.
- Ny fanontaniana lehibe napetraky ny mpamokatra tantsaha: ahoana no ahitanao ny vondrona misy anao amin'ny Internet?
Hahafaly anay ireo mpandray anjara vaovao!
Tags: fantsona telegramfivarotana legioma